Madheshvani : The voice of Madhesh - विश्वविद्यालयमा शैक्षिकस्तर उकास्न हाम्रो लडाइँ जारी छ : डा.उदयकिशोर तिवारी
विश्वविद्यालयमा शैक्षिकस्तर उकास्न हाम्रो लडाइँ जारी छ : डा.उदयकिशोर तिवारी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ
० राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ गठनको उद्देश्य के हो ?
— नेपालमा रहेका सबै विश्वविद्यालयहरूमा स्तरीय शिक्षा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हामी लडाइ लड्दै आएका छौं । त्यसमा हामी केही हदसम्म सफल पनि भएका छौं । भर्खरै सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट ऊर्जावान साथीहरूलाई ल्याएर एउटा कमिटी गठन भएको छ । अझै पनि हामी स्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षाका लागि यो प्राध्यापक संघ प्रतिबद्ध भएर लड्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।
० तेस्रो महाधिवेशनबाट केकस्ता एजेन्डाहरू पारित भयो ?
— शैक्षिक सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने मूल नाराका साथ हामीले तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं । यसमा हामीले उच्च शिक्षा, शैक्षिक आदर्श, गुणस्तरीय शिक्षामा आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला आदिको विश्वविद्यालयस्तरमा समानुपातिक प्रवेशको सुनिश्चितता, समानताको अधिकार, प्राज्ञिक मूल्यमान्यता, पदीय मर्यादा एवं आफ्नो पेशागत हकहित संरक्षण तथा सम्बन्धन गर्दै समानतामूलक समाजको निर्माण उद्देश्यका साथ आगामी कार्यहरू गर्नेछौं ।
० तपाइँले भनेका यी कुराहरू नाराका लागि मात्र हो कि व्यवहारमा पनि लागू भएको छ ?
— हामीले उठाएका यी कुराहरू नारा मात्रै होइन, केही हदसम्म लागू पनि भएको छ । शिक्षाको स्तर जसरी खस्किदै गएको थियो त्यसको सुधारका लागि कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौं ।
० खासगरी, तराई–मधेशको शैक्षिक अवस्था जसरी दिनप्रति दिन खस्किँदै गएको छ, यसप्रति के गर्नुभएको छ ?
— हामीले तराई–मधेशका सबै जिल्लाका क्याम्पसहरूमा प्रत्येक महिना एउटा कार्यक्रम गर्ने, त्यहाँका स्थानीयहरूसँग छलफल गर्ने र शिक्षास्तरलाई कसरी माथि लान सकिन्छ त्यस विषयमा हामीले निर्णय नै गरेका छौं । हामीले तराई–मधेश हुँदै नेपालका प्रत्येक जिल्लामा शिक्षाको स्तर उकास्नका लागि छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । समग्र नेपालको गुणस्तर शिक्षाका लागि हामी लागिपर्ने भन्ने कुराको निर्णय हामीले यही महाधिवेशनबाट गरेका छौं ।
० मधेशको शैक्षिक अवस्था दिनप्रति दिन खस्किँदै जानुको मूल कारण के हो ?
— यसको मुख्य जिम्मेवार सरोकारवाला विद्यार्थीका अभिभावक तथा समाजका सचेत नागरिकहरू नै हुन् । स्थानीय सरोकारवालाहरूले जबसम्म शैक्षिक अवस्थाप्रति चासो राख्नुपर्छ । त्यहींअनुरूप हामीले प्रत्येक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा हामी अनुगमन गर्ने काम गर्छौं । विगतमा विभिन्न आन्दोलनहरू हुँदा राम्ररी विद्यालय पनि सञ्चालन हुन सकेन । तर, अब हामी विस्तारै त्यसलाई सुधार गर्दै जानेछौं । हाम्रै प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह डिपुटी कन्ट्रोलर हुनुहुन्छ । उहाँले जनकपुरमा धेरै हदसम्म शैक्षिक सुधारमा सफल हुनुभएको छ ।
० शिक्षामा राजनीतिकरण हुन थालेपछि शैक्षिक अवस्था खस्किएको भन्ने गरिएको छ नि ?
— यो देश नै राजनीतिले चलेको हो । खाससगरी त्यसमा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको पहुँच नभएर पनि हामी पछाडि परेका छौं । विश्वविद्यालयहरूमा नेपालका ठूला भनाउँदा दलहरूकै हालीमुहाली रहेकोले अहिले यो अवस्था रहेको छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूमा भागवन्डा गरेर योग्य प्राध्यापक नियुक्त नहुने कारणले गर्दा पनि मधेशलगायत देशकै शिक्षाको स्तर खस्केको छ । तर, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ५१ दिनसम्म तालाबन्दी पनि ग¥यौं, धेरै दिनसम्म संघर्ष ग¥यौं । अहिले भागवन्डा पनि हट्दै गएको छ र पोष्टअनुसार व्यक्तिहरू नियुक्ति भएको देखिएको छ ।
० प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धताले शिक्षामा प्रभाव पारेको हो ?
— अवश्य छ, यसमा दुईमतको कुरो छैन । तर, खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसले गर्दा मात्रै प्रभाव परेको छ ।
० राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ पनि एउटा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेको छ नि ?
— राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ राजपा नेपालको भ्रातृ संगठन होइन, हामी शुभेच्छुक संस्था मात्रै हो । हाम्रो विचार मिल्ने जुनसुकै पार्टीसँग काम गर्न सक्छौं । त्यसकारण हामी पार्टीका कार्यकर्ता होइन । हामी विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाउँदैनौं । प्राध्यापक संघहरू कसै न कसैको विधानसँग सहमत मात्र हुन्छ, त्यसैले हामी राजपा नजिकको संघ हो । हामीले शैक्षिक सुशासन, शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँचका लागि हामी लडाइँ लड्दै आएका छौं ।
० लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले विगतमा समानुपातिक समावेशिताका लागि विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी पनि गरेको थियो । कतिसम्म मागहरू पूरा भए ?
— हाम्रो संगठनको नाम नै तालाबन्दी गर्ने संगठन पनि भनिएको छ । तर, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले हामीसँग एकखाले लिखित सहमति गर्ने तर पालना नगरेको हुनाले मात्रै हामी तालाबन्दी, घेराउ र बन्द गर्न बाध्य हुन्छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत देशका जुनसुकै विश्वविद्यालयको सिस्टममा हामी पनि बस्नु पाउनुप¥यो । तर, त्यो सिस्टम केही खास पार्टी निकटका प्राध्यापक संघका लागि मात्रै छ । यो सिस्टम हटाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
० तपाइँहरूको मूल माग केके छन् ?
— सबैको सम्मानजनक पहुँच हुनुप¥यो । शिक्षामा सबैको पहुँच हुनका लागि संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हाम्रो मूल माग हो । अहिले देश संघीयतामा गएको छ र सातवटा प्रदेश सरकार रहेको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १, २ र ५ प्रदेशमा भागवन्डा नगर्नुस् भन्ने हाम्रो हो । मधेशका क्याम्पसहरूमा राजनीतिक भागवन्डाको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो । यही लडाइँ हामी लड्दै आएका छौं । हामीले वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुर क्याम्पस र सिरहा क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्त हुन दिएका छैनौं । यी तीनवटै क्याम्पसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भागवन्डा मिलाएका छन् । उनीहरूले आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गर्ने र मधेशका शिक्षास्तरलाई झन् बिगार्ने उद्देश्य लिएका छन्, त्यसलाई तोड्नका लागि हामीले संघर्ष गर्दैछौं । कमसेकम मधेशका २२ वटै जिल्लामा रहेका क्याम्पसहरूमा दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई क्याम्पस प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसैअनुरूप हाम्रो डरले तीनवटा क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्त भएको छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले बारम्बार एकलौटीरूपमा केही सीमित वर्गका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्दै आएका छन् ।
० कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नियुक्ति गर्ने क्याम्पस प्रमुखहरू योग्य हुँदैनन् ?
— उनीहरूले राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । जनकपुर क्याम्पस कांग्रेसको भागमा हो तर उसले नियुक्त गर्ने व्यक्ति त्यति योग्य, मधेशको शैक्षिकस्तर उकास्ने भिजन भएको हुँदैन । जसले निष्पक्षरूपमा मधेशको शैक्षिक अवस्था उकास्न चाहन्छ, जोसँग भिजन छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिँदैन । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्ने मानिसहरूलाई मात्रै ती दलहरूले क्याम्पस प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्दै आएका छन् । ती दलहरूले नियुक्त गर्ने क्याम्पस प्रमुखहरू योग्य होइनन् भन्ने कुरा होइन, तर उनीहरूभन्दा पनि योग्य, अनुभवी र भिजन भएका व्यक्तिहरू छन् । सबैलाई लिएर अगाडि बढ्ने खालका अनुभवी व्यक्तिहरू किन नदिने भन्ने हाम्रो माग हो । कमसेकम मधेश प्रदेशमा भागवन्डा नगरिदिनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
० राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको नेतृत्व तपाइँ तेस्रो पटक गर्दै हुनुहुन्छ । यो कार्यकाल कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?
— एकदम चुनौती छ । चुनौती नभएको भए अरूले नेतृत्व लिन आउँथ्यो । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा भएका भागवन्डालाई तोड्नुपर्ने, हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नका लागि फेरि संघर्ष गर्नैछ । नेपालमा सयभन्दा बढी क्याम्पसहरू छन्, ती सबै क्याम्पसहरू तीनवटा पार्टीको भागवन्डामा छन् । त्यसका विरूद्ध लड्नुपर्ने छ । मधेशका शैक्षिकस्तर उकास्नका लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ । हामीले प्रत्येक जिल्लामा शिक्षकको बारेमा बहस गर्ने कार्यक्रम सुरू गर्न थालेका छौं । शिक्षामा कम्प्रोमाइज हुँदैन भनेर हामीले महाधिवेशनबाट निर्णय पनि गरेका छौं ।